Sawirro: Isbarbar dhiga soo dhaweynta Farmaajo ee magaaloyinka Cadaado & Baydhabo (Keebaa saxan) | Entertainment and News Site
Home » News » Sawirro: Isbarbar dhiga soo dhaweynta Farmaajo ee magaaloyinka Cadaado & Baydhabo (Keebaa saxan)
Sawirro: Isbarbar dhiga soo dhaweynta Farmaajo ee magaaloyinka Cadaado & Baydhabo (Keebaa saxan)
daajis.com:- Soo dhaweynta Madaxweyne Maxamed C/llahi Farmaajo ee magaalada Cadaado ayaa waxbadan ka duwan soo dhaweenadii loogu sameeyay gudaha dalka.
Soo dhaweynta Madaxweynaha ayaa wakhti badan qaadatay, waxaana xooga la saaray amniga iyo bartakoolka.
Inata uu Madaxweynaha ku sugnaa gudaha Garoonka Cadaado, waxaa laga ilaaliyay dhamaan ciidamada labisan iyo kuwa aan la bisneyn, iyadoo sidoo kale la adkeeyay bartakoolka.
Waxaa aad loo yareeyay mas’uuliyiinta soo dhaweyneysa Madaxweyne Farmaajo, iyadoo dhanka Galmudug uu ka socday Hogaamiyaha maamulka Xaaf iyo ku-xigeenkiisa Carabeey, halka liiska soo dhaweynta laga saaray xubno ka tirsan wakiilada beesha caalamka oo dalbaday inay wax kasoo dhaweeyan Madaxweynaha.
Sidoo kale, waxaa mudada lagu guda jiray soo dhaweynta Madaxweynaha Garoonka laga saaray Sawir qaadayaasha oo iyagu howshooda u igmaday hal ruux, kaa oo sii qeybinaayay Sawirada.
BAYDHABO: Madaxweynaha ayaa Safar shaqo ku aaday April 23, 2017, magaalada Baydhabo ee xarunta Gobalka Baay, waxaana soo dhaweyntiisa 1aad ee magaaladaasi ka muuqday isku dhexyaac iyo Bartakool xumo.
Madaxweynaha ayaa markii uu ka dagay Garoonka Baydhabo waxaa ku yaacay dhammaan mas’uuliyiintii lagu diyaariyay Garoonka sida kuwa maamulka, Madaxdii kaga sii horeysay Baydhabo iyo Ciidamadii loo diyaariyay qaadashada Salaan Sharafka.
Madaxweynaha ayaa markii uu ka degay Garoonka Baydhabo kala garan waayay Madaxda iyo Mas’uuliyiinta ka tirsan Golaha Baarlamaanka Koonfur Galbeed, waxa uuna ku khasbanaaday inuu Salaan la dhexmaro.
Maamul Goboleedyada ayaa inta badan xadidin shaqsiyaadka qaabilsan soo dhaweynta Madaxweynaha, waxa ayna taa dhabar jabisaa nidaamka lagu qaabilo madaxda.
SOO DHAWEYNTA FARMAAJO EE MAGAALADA CADAADO
SOO DHAWEYNTA FARMAAJO EE MAGAALADA BAYDHABO